Hey Mike! Ire ahia bukwara maka ime etemeete | Martech Zone
Sọnde, Septemba 23, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Yesnyaahụ, enwetara m email site n'aka onye na-agụ akwụkwọ, Mike, onye jụrụ ihe kpatara m ga-eji tinye foto na blọọgụ m nke na-egosipụta m dị ka ntutu isi gbara ọchịchịrị, dabara adaba ma belata mgbe - n'ezie - m na-acha awọ ma buru oke ibu. N’ụzọ na-emegide onwe ya, foto ị hụrụ na blọọgụ m bụ ihe dị ka afọ 5 gara aga. Enweela m kilogram ole na ole, ntutu m na-achakwa ntụ, mana ọ bụ m nọ ebe ahụ.
Na m banyere peeji nke, ị ga - ahụ foto m na - ezute Seth Godin. Foto dị na nkụnye eji isi mee m nwere otu uwe ahụ m yi na Seth na foto a. Ọ bụ uwe m masịrị m ma m ka na-eyi ya. Enwetụbeghị m ya, mana achọpụtara m na afọ m na-adabere na eriri m karịa ka ọ dịla.
N’ọnwa gara aga a kpaliri m ịhapụ kilogram ole na ole wee tụfuo kilogram 10. Na ime ihe n'eziokwu, apụrụ m iguzo ida kilogram 100. O doro m anya na m buru oke ibu - ihe si na-ebi ndụ na-enweghị mmega ahụ na oke nri.
Ka o sina dị, email Mike tụrụ m ụjọ mana enwere m mmetụta ịzaghachi ya. Ebumnuche nke eserese m na isi m abụghị ịchọta foto kachasị egwu m nwere ike ịchọta ma tinye ya ebe ahụ iji mee ka ndị mmadụ ụjọ. Ọ bụ foto na-amasị m. A bụ m, n'eziokwu, a pụrụ ịmata m na foto a (ọ bụghị nke ahụ ogologo oge gara aga) na ndị mmadụ na-abịakwute m oge niile iji mee ka m mara na ha gụrụ blọgụ m.
The foto na-eme ya ọrụ… ọ na-etinye a anabata ihu m blog na-egosi folks na e nwere ezigbo onye na-akpata ya.
Have hụtụla Pamela Anderson na-enweghị etemeete? Onwere onye gbagoro Pamela wee gwa ya na ọ ‘ghaara’ ndị mmadụ maka na ọ dị mma karịa iji paịnd emeju? Ọ bụghị n'ezie! Na naanị nkà ya is iji mara mma.
Ọrụ m abụghị ịbụ nwoke ma ọ bụ onye omee. Ọrụ m bụ ịrụ ọrụ n'ime ahịa na teknụzụ ma soro ndị na-agụ blọgụ m kerịta ozi ahụ. Ọ bụrụ n ’ị chere na m na-eme onye ọ bụla nsogbu ma ọ bụ bụrụ onye na-anaghị eme ihe n’eziokwu site n’iji ọmarịcha ụlọ ọrụ mara m mma wee tinye ya na isi m my nweta ndụ.
Mike, ị ga-abụ otu nwoke na-eziga ya hamburger azụ n'ihi na ọ dịghị ka azụmahịa. Written deela Tom Cruise ka ị mata ya ka o kwesiri ịdị mkpirikpi ka ọ dị n'ihe nkiri ya? Oge ọzọ ị na-ekpebi ịkpọtụrụ m site na m na kọntaktị ụdị, nwoke elu na-eji ezigbo adreesị ozi-e. Edere m adreesị ozi-e ị gafere m wee daa.
PS: Anaghị m eyiri ihe ọ bụla etinyere na foto ahụ. 🙂
Sep 24, 2007 na 9:23 PM
Douglas, ekele maka ịlafu 10 pound! 10 nke mbụ bụ nke siri ike, mana debe ya 🙂
Sep 24, 2007 na 10:13 PM
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ a, ọ dị m ka m ikwu okwu na ya. Yingmụ ihe banyere mmekọrịta mmadụ na ibe m emeela ka m nwee echiche na-adọrọ mmasị banyere ilu mgbe ochie ahụ? Achọpụtara m na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mmadụ ole enwere - dị ka onye na-agụ Mike - bụ ndị na-amaghị na ihe a dị adị, ma ọ bụ na-emejọ ya kpamkpam. Echere m na esemokwu gị na-akwado nke a dị ka omume a nabatara nke ọma. Ọ dị mma n'ezie ịhụ ihu nnabata na elu blọọgụ gị ma ọ bụghị n'ofe oke echiche ma ọ bụ omume iji hụ ihe mere ị ga-eji họrọ onye na-eto eto, nke ọzọ? na-ele ihu n’ihu ọha. Pamela Anderson bit bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị. Nke a bụ oge mbụ m hụrụ Pam n’emeghị ya? nwoke, odi m so? gha ụgha! Ekwenyesiri m ike na ọ dịghị onye (ma e wezụga Mike n'ezie) na-arịọ gị arịrịọ maka ụlọ ọrụ gị. Enwere m obi ụtọ na ị họọrọ ịde ya na ọbụna karịa nke mere na Mike kpebiri ịkpọ gị na ya, na-enweghị ndị dị ka Mike, anyị agaraghị enwe obi ụtọ nke aghụghọ ahụ nke gị. Emechakwa, ọ bụghị naanị ịzụ ahịa? Dịkwa maka ihe etemeete,? Ọ bụkwa banyere ikike ịgbagha oge ụfọdụ nke negativity n'ụzọ nke ma ọkachamara ma n'otu oge ahụ amamihe na okike iji mee ka ọha na eze dịrị n'akụkụ gị. Ị mere nke ọma.
Sep 24, 2007 na 11:24 PM
Ouch Doug, na-adakwasị anụ ndị na-adabaghị na ha? Achọrọ m ka ị nwee obi ụtọ ịhapụ ibu. Otu n'ime ndị ọrụ ibe gị mbụ, Dan W., na-aga n'ihu na-adapụ nwayọ nwayọ ma enwere m olileanya na ị ga-eme otu ihe ahụ.
Sep 25, 2007 na 7: 53 AM
Ekele na 10 pound, Doug, na ọdịmma na usoro mmega n'ọdịnihu. Abụ m otu n'ime ndị ahụ nwere obi ụtọ, gọzie nnukwu metabolism, mana ejiri m n'aka na ọ ga-adaba n'oge na-adịghị anya, ka m ruru 30s.
Sep 26, 2007 na 11: 08 AM
Ezi ọrụ Doug maka ịhapụ ụfọdụ ibu. Ọ dị mfe itinye na pound na ike iwepu ha.
Agbanyeghị, enwere m nchegbu na ị ga-akpọ onye dị ka nke a na ọkwa ọha.
Onye a Mike kpọtụrụ gị, na nzuzo, iji weta ihe na n'ihi na ọ "juru gị anya," nke ahụ mere ka ọ tozuo ọkwa?
Kedu ozi ịntanetị nkeonwe ndị ọzọ ị na-enweta ma ghọọ posts? enwere ike i choro iwu nzuzo na saiti gi?
Otu n'ime ihe ị kwuru n'elu si Patrick Farrell na-ekwu "ịdaba anụ oriri na trolls na-adịghị ọbụna biputere kwuru" ma anaghị m ahụ otú a onwe email na-ahụta ka a troll.
O doro anya na Mike wetara isi okwu ma kwuo ya n'ime post a.
Ekwenyere m na ọ bụ ntakịrị ihe nduhie ka inwe foto okenye dịka isi gị. Ekwenyere m na ihe kpatara i ji mee ya.
Agbanyeghị, gịnị ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ị were gị n'ọrụ maka okwu ma ọ bụ okwu ngosi ma ha chere na ha na-enweta nwa okorobịa ahụ site na isi gị, mgbe ahụ ị gosipụtara wee dị iche?
Ka o sina dị, ezi ọrụ na idobe ibu. Walksga ije kwa ụbọchị na ị drinkingụ nnukwu mmiri ga-enyere aka.
Ọzọkwa, njikwa njikwa kwa. Ama m na o siri ike mana ọ dị gị ka ọ bụ onye raara onwe ya nye. I nwere ike ime ya. Ndị na-agụ akwụkwọ gị nwere okwukwe na gị.
Sep 26, 2007 na 1:13 PM
Hm. Nke a bụ post m na-achọ ịza ajụjụ na, mana enweghị ike. Ugbu a, obi dị m ụtọ maka ya n’ihi na ọ na-enye m ohere ịhụ ihe ndị ọzọ kwuru.
Echeghị m na ị dị iche karịa mmadụ karịa na foto gị isi. Ọ bụ "headshot" mgbe niile, anyị na-adịkarị iche mgbe ị gbakwunye ngwugwu niile. Kedu ihe ha chọrọ ka ị mee? Zipu foto gi zuru ezu n'ime gi? Ugbu a, nke ahụ ga-atụnye ụtụ na ihe ọmụma na agụmakwụkwọ anyị na-enweta na saịtị gị, ọ bụ na ị naghị eche? (fanye mpịakọta anya na “julie” sarcasm ebe a) M na-ahọrọ mgbe blọọgụ ọ ga-agụ dabere na m nwere ike nweta ezigbo onyonyo nke blogger.
Ekwenyesiri m ike na nkwupụta ahụ na foto gị ochie na-eduhie, ọkachasị mgbe ewere goro ikwu okwu ma ọ bụ nye okwu. Na-enye ọrụ ndị ahụ maka nzukọ m ma ekwesịrị m ịsị na onye ọ bụla na-atụ ụjọ mgbe niile oke ego ha na-amụta n'aka gị. Onweghi onye n’enwe nsogbu maka ọdịdị ahụ gị (ọ bụrụhaala na ị na-asa ahụ ma jiri ejiji, ejiri m n’aka).
Dịka ezigbo enyi na onye ọrụ ibe m na-ekwu na ị ga-etinye foto gị na nkụnye eji isi mee ka ọ ghara iche echiche ọzọ. Ọ na-anọchi anya ihu ọchị gị na obi ọma gị; okwu gị na posts gị na-anọchi anya ọgụgụ isi gị na nchịkọta ozi dị ukwuu na ịgbasa nka.
Grr. Isiokwu a n'ezie "nwetara m hackles elu". Ekele na ọnwụ ọnwụ ma jigide ya, agbanyeghị! Anyị chọrọ ka ahụ dịrị gị mma otu ị nwere ike ịdị. Enweghị m ike iche ụdị ụdị dynamo ị ga - adị ka inwekwu ume… ..gbapụ ụwa ……
Dec 5, 2007 na 3:29 PM
Chei - onye ọ bụla nwere echiche nke aka ya banyere ọkwa a na nke ahụ bụ ihe ekwuru maka. Echere m n'onwe m na ọ bụ ezi echiche ịdebanye nke a. Ọ bụ ihe mmeghe anya maka m ịghọta na ọ dị mkpa itinye ihe osise nke onwe gị nke dị mma. N'ezie, ịchọọ foto na-eme ka a ghara ịmata gị, mana na nke a, ịchọghị. Daalụ maka igosipụta echiche ahịa ahịa a nye anyị niile.